YPI – မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် | MoeMaKa Burmese News & Media
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏ အလှူများ လက်ခံ၇ရှိကြောင်း ရွှေည၀ါဆရာတော် ပြောကြား
ရွှေတြိဂံ မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းအား တရုတ်ပြည်သို့ ပို့ဆောင် - Laos sends accused drug lord to China over Mekong killings
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ရဟန်းရှင်လူများအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော် ဆက်လက်နှိုးဆော်
၈၄-၉၃ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများက ဆရာဟောင်းတဦးကို သီးခြားကန်တော့
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော Galaxy A များ စတင်ရောင်းချတော့မည်
ပထမအကြိမ် ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံ စာတမ်း ၁၄ ခု ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ
စစ်တွေမြို့ လမ်းမများပေါ်တွင် ထောင်ချီသည့် ရခိုင်အမျိုးသမီးများက ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း၍ (OIC) ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
ရခိုင်ဒေသ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည်ဆိုသော သတင်းများ မကြားသိရသေး - news from Eleven Media Group website
မြန်မာဂျာနယ်လစ်နက်ဝပ်က အီလဲဗင်းသတင်းထောက် ထောင်ချခံရမှုအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
အစိုးရ မြေသိမ်းသည်ဟုဆိုကာ လွိုင်ကော်တွင် ဆန္ဒပြ
bi-election - ကြံ့ဖွံ့နှင့် NLD အား မဲပေးရေး သဘောထား ကွဲလွဲပြီး လင်မယား ၁၄ စုံ ကွာရှင်းပြတ်စဲ
အိမ်ရောင်းသည့်အခါမှ ရောင်းရငွေ ခွဲယူရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး သဘောတူခဲ့ - Daw Suu to appeal ruling in home dispute ‎
YPI – မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
by Yangon Press International on Thursday, 10 May 2012 at 04:07 ·
မေလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်- သူရမျိုး(YPI)
ကလိုထူးဘော (ယခင် DKBA တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်မတော်) ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် ခေါ်ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးအား ထိုင်းနိုင်ငံမှ မူးယစ်ရာဇာစာရင်းထဲ ထည့်သွင်းကာ ဆုငွေထုတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများအား ဖိတ်ကြား၍ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ် ဆုံဆည်းမြိုင် ကျေးရွာ၌ ယနေ့နံနက် ၉နာရီခွဲမှ ၁၀ နာရီခွဲအထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၎င်းတို့လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး
ကိစ္စနှင့် လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲ နယ်စပ်အကောက်အခွန်၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် မိုင်းတွင်းတူးဖေါ်သည့် လုပ်ငန်းများဖြင့် ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်က ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့်ပတ်သက်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သံသယကို ရှင်းလင်းသွားစေရန် ထိုင်းအစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရ မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးဋ္ဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ လာရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်သည်ဟုလည်း ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ကလိုထူးဘော အဖွဲ့အား ထိုင်းအစိုးရမှ ယခုကဲ့သို့ စွပ်စွဲသည့်အတွက် မြ၀တီ-မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေး တံတားကို ပိတ်ပင်ရန် မြန်မာအစိုးရသို့ အဆိုပြုသွားမည်ဟု
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယခုလောလောဆယ် မဟုတ်သေးကြောင်းလည်း သတင်းထောက်တဦး၏ မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြား ပြောဆိုသွားသည်။
ကလိုထူးဘော အဖွဲ့၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် ခေါ် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး (ဓါတ်ပုံ-သူရမျိုး YPI)
ကလိုထူးဘောခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ်အား ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလိုရှိနေသည့် မူးယစ်ရာဇာ ၂၅ ဦးစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ချယ်နယ် (၃) ရုပ်သံ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ပြီးနောက် ကလိုထူးဘောအဖွဲ့မှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ယခုလို သတင်းမီဒီယာများအား ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာများမှ သတင်းထောက် ၄၀ ကျော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ချယ်နယ် ၃ ရုပ်သံအပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာသမားများပါ
ကလိုထူးဘောအဖွဲ့ (ယခင် ဒီကေဘီအေ) အဖွဲ့သည့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားသည့် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားကာ မြ၀တီမြို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်
အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည် ရယူခဲ့သည်။ ။
One Response to YPI – မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
Nay Naw on May 11, 2012 at 4:02 pm
Wow!! How shameless Thailand is. They put those KNU under their wings and smuggle resources from Karen and Mon passing borders. Together with KNU, they collect “set kyay”, set up trafficking rings across border. Now, with new business opportunities on sight, they just bite the hands that feed them. KNU is supplying and feeding Thai Border Armies for more than6decades now.
KNU on the other hand, never did anything good for its own people not to mention the country. Now they are howling desperately – saying thing like ” thialand’s claim for his arrest undermines the sovereignty of Myanmar”. What bullshit! since when they consider sovereignty? they are selling country to Thais.